Ny Tetirazan’i Jesosy | Ny Lamba Taloha
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Batak (Toba) Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cinghalais Cinyanja Danoà Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Goun Grika Groenlandey Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Javaney Kambôdzianina Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikamba Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Macua Malagasy Maltais Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Maya Mongol Myama Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nias Norvezianina Nyaneka Nzema Ossète Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sena Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tatar Tetun Dili Tiorka Tiv Tojolabal Tok Pisin Tseky Tshiluba Tshwa Tsonga Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Umbundu Venda Vietnamianina Wallis Waray-Waray Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Iza no rain’i Josefa?
Mpandrafitra tany Nazareta i Josefa, ary izy no nitaiza an’i Jesosy. Iza anefa no rain’i Josefa? Hita ao amin’ny tetirazan’i Jesosy, ao amin’ny Filazantsaran’i Matio, fa i Jakoba no rainy. I Lioka indray anefa nilaza hoe “zanak’i Hely” izy. Nahoana no tsy mitovy ny zavatra nolazain’izy ireo?—Lioka 3:23; Matio 1:16.
Nilaza i Matio hoe: “Jakoba niteraka an’i Josefa.” Hita amin’ilay teny grika nampiasain’i Matio tamin’io fa i Jakoba no rain’i Josefa. Ny tetirazan’i Jesosy avy amin’i Josefa rainy àry no noresahin’i Matio. Hita amin’izy io fa manan-jo handova an’i Davida Mpanjaka i Jesosy, satria zaza notezain’i Josefa.
I Lioka kosa milaza fa “zanak’i Hely” i Josefa. Ilay hoe “zanak’i”, dia mety hidika hoe “vinantolahin’i.” Mitovy amin’izany ilay ao amin’ny Lioka 3:27. Voalaza ao fa “zanak’i Nery” i Sealtiela, nefa i Jekonia no tena niteraka azy. (1 Tantara 3:17; Matio 1:12) Azo inoana àry fa nanambady ny zanakavavin’i Nery i Sealtiela, ka lasa vinantolahiny. Hoatr’izany koa i Josefa. Lasa “zanak’i” Hely izy, rehefa nanambady an’i Maria zanakavavin’i Hely. Ny tetirazan’i Jesosy avy amin’i Maria reniny àry no noresahin’i Lioka. (Romanina 1:3) Hita amin’izany fa miresaka tetirazana roa momba an’i Jesosy ny Baiboly. Samy hafa ilay izy nefa samy tena ilaina.
Inona no karazana lamba sy loko fandokoana lamba nisy taloha?
Volonondry nolokoana hita tao amin’ny lava-bato tany akaikin’ny Ranomasina Maty, talohan’ny taona 135
Volon’ondry sy volon’osy ary volon-drameva no tena nanamboarana lamba, tany Israely sy ny firenena manodidina azy. Ny volon’ondry no tena be mpampiasa tamin’izany, ary matetika ny Baiboly no miresaka momba ny ondry, fanetezana volon’ondry, ary akanjo vita tamin’ny volon’ondry. (1 Samoela 25:2; 2 Mpanjaka 3:4; Joba 31:20) Nisy rongony naniry tany Ejipta sy Israely, ary nampiasaina mba hanamboarana lamba koa izy ireny. (Genesisy 41:42; Josoa 2:6) Mety ho tsy namboly landihazo ny Israelita fahiny. Nampiasaina tany Persa kosa izy io, araka ny resahin’ny Baiboly. (Estera 1:6) Teo koa ny lamba landy. Tena lafo vidy be sady mihaja izy io, ary azo inoana fa ireo mpivaro-mandeha avy any Azia Atsinanana ihany no nivarotra azy.—Apokalypsy 18:11, 12.
Hoy ilay boky hoe Jesosy sy ny Fiainany (anglisy): “Nisy lokony isan-karazany ny volon’ondry. Nisy fotsy be ary nisy mivolontsôkôlà. Ny sasany antitra kokoa ny lokony, ary ny hafa tanora kokoa.” Lokoana koa anefa izy io matetika. Nalaina avy tamin’ny sifodranomasina sasany ny loko volomparasy, ary tena lafo be izy io. Zavamaniry isan-karazany, fakan-javamaniry, ravin-kazo, ary bibikely no nampiasaina mba hahazoana loko, ohatra hoe mena, mavo, manga ary mainty.